Thwebula Avast Free Antivirus 20.10.5824 – Windows – Vessoft
WindowsUkuphephaAntivirusAvast Free Antivirus
Ikhasi elisemthethweni: Avast Free Antivirus
I-Wikipedia: Avast Free Antivirus
I-Avast Free Antivirus – umkhiqizo we-antivirus owuthandwayo ngezici ezintsha zokuphepha kanye nezinsongo ezihlakaniphile zokuthola. Isofthiwe inikeza ukuphepha okuhle kakhulu kwi-intanethi ngenxa yobuchwepheshe bokuvikela ngokumelene namawebhusayithi wokuphanga kanye namanye ama-scammers enethiwekhi. I-Avast Free Antivirus Khulula isekela izindlela eziningi zokuskena kufaka phakathi imodi ehlakaniphile ethola izilungiselelo eziyingozi kanye ne-malware ezingenza isistimu isengozini. Isofthiwe ihlaziya i-Wi-Fi ekhaya, ithola ubuthakathaka bayo nokuphulwa kokuphepha. Izinhlelo ze-Avast zama-Antivirus ze-Antivirus zekhodi enonya futhi ziqaphe ukuziphatha kwazo ukuze zivimbele noma yimuphi umsebenzi osolisayo. Futhi, i-Avast Free Unqulo wesi arab kuphela iqukethe imenenja yephasiwedi eyakhelwe ngaphakathi, eyenza ukudala noma ukukhiqiza iphasiwedi enamandla yokuvikela wonke amaphasiwedi womsebenzisi.
Ukuvikelwa kwe-Virus ne-spyware
Ukuhlaziywa kokuziphatha kwenethiwekhi kanye nesofthiwe
Isandiso sesiphequluli sokuvikela
Thwebula Avast Free Antivirus
I-Avast Safe Browser – isiphequluli sisuselwa kunjini yeChromium futhi iza nezandiso nezilungiselelo zokuthuthukisa ubumfihlo nokuphepha kwi-inthanethi.
I-Avast uNdunankulu – i-antivirus eneqoqo elikhulu lamathuluzi wokuvikelwa okuphelele kwekhompyutha yakho kusukela ekusongelweni kwangaphakathi nangaphandle kwezinhlobo ezahlukene.
I-Avast Sula – insiza yokuhlanza i-PC yakho kwidatha ye-Avast engadingekile kufaka phakathi amafayili, abashayeli kanye nokufakiwe okurejista okuvame ukusala ngemuva kokukhishwa kwemikhiqizo yama-antivirus ye-Avast.
I-Avast Internet Security – iqoqo lezisetshenziswa zokuvimbela ukuvikelwa okuphelele kwekhompyutha yakho ezinhlobonhlobo zezinsongo ezisakazeka ku-inthanethi.
I-Avast Pro Antivirus – i-antivirus enezinga lokuvikelwa eliphakeme elivimbela amagciwane ukungena kwikhompyutha futhi ihlole ukuphepha kwinethiwekhi yonke.
Amazwana ku Avast Free Antivirus
Avast Free Antivirus software ehlobene
I-ESET NOD32 Unqulo wesi arab kuphela – isixazululo se-antivirus ne-antispyware ukuvikela ubumfihlo nokuphepha kwe-PC yakho yasekhaya ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuhlaselwa.
I-Bitdefender Antivirus Free – isisombululo esingama-antivirus esithembekile esivela enkampanini enedumela elihle embonini ye-cybersecurity ukuvikela ikhompyutha yakho ezingozini ezisezingeni eliphakeme zokusabisa, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi kanye nokuhlasela kwewebhu.
I-AVG AntiVirus Free – i-antivirus ethandwayo yokuvikelwa okuyisisekelo kwe-PC ukulwa namagciwane ezinhlobo ezahlukahlukene nokuvikelwa komsebenzi ku-inthanethi ngokumelene nezinsongo ezintsha.
I-eScan Anti-Virus – isoftware yama-antivirus ye-MicroWorld Technologies ukuvikela ikhompyutha yakho kumagciwane, i-malware, ogaxekile nokuhlaselwa kwinethiwekhi.
Lokhu yisivikelo esibanzi ngokumelene ne-malware ne-spyware, enikeza ukupheka okuphephile kwi-intanethi namathuluzi engeziwe ahlobene nobumfihlo.
IGarena + – iplatifomu yomdlalo enekhono lokwakha inethiwekhi yendawo phezulu kwe-inthanethi. Isoftware isekela inqwaba yemidlalo nengxoxo elula yokuxhumana.
I-BearShare – isoftware yokwabelana ngamafayela ukusesha nokulanda amafayela emidiya. Isoftware iqukethe injini yokusesha enamandla ukuthola ngokushesha amafayela adingekayo.
Ithuluzi elinamandla ukubuyisa idatha kusuka internet. Isofthiwe ikuvumela ukulanda izingxenye noma yonke webhusayithi kanye ubabheka ngesivinini.